Zuva: Ndira 4, 2020
Mari ye ISPARK Yakawedzera muna 2020?
İSPARK yekupaka mari yeIstanbul Metropolitan Municipality yakawedzerwa kusvika makumi mana muzana. Zvizvarwa zvemunyika zvakaita sekudaro kwakaitika nemutongo wakatorwa mumisangano yeparamende yaDecember 40 kuIMM. zvekare [More ...]
Runako rwePiyano Campaign paÜsküdar Metro Station
Iyo inyasha yekutanga yakatanga pane Üsküdar - Çekmeköy mutsara. Muimbi Barutay Kartal anoridza piyano ku Üsküdar station kubatsira vana vemumugwagwa. Kushanda seMitambo Yekudzidzisa Nyanzvi ku Ministry yeVadiki neMitambo [More ...]
Tekisi muTrabzon Dzokerai kuTekisi
Kuongororwa kwematambudziko eTrabzon pane ajenda yemusangano aive azere nesimanje. Ömer Hakan Usta, Mutungamiri weChamber of driver uye mota, akataura kuti vanotenda kuti vanhu veTrabzon nevanozvitoro vafarire shanduko iyi. [More ...]
Chekutanga Vakadzi Parkomats vakatanga kushanda muEskişehir
Mukutanga kwaDecember, mukadzi wekutanga parkomats akatanga kushanda muEskişehir Metropolitan Municipality, iyo yakazivisa kuti ivo vaizoshandisa vakadzi veku parkomat chiziviso chakaziviswa mumapepa avo enhau enhau. Akatanga kushanda paMahmut Pehlivan Street muKızılcıklı mumazuva ekutanga. [More ...]
Chitatu Chitima Chinosvika paNarlıdere Subway
Fahrettin Altay - Narlıdere metro mutsetse wekugadzira tunneling muchina wakasvika pachiteshi chechitatu. İzmir Metropolitan Municipality Rail System department, Bornova Evka 3 - Fahrettin Altay metro mutsara wekuwedzera Narlıdere'ye [More ...]
Cengiz Kuvaka Kuvaka 2.7 Bhirion TL Railway muCroatia
Cengiz Kuvaka kuchaita 2.7 mabhirioni emapaundi njanji muCroatia: Dünya pepanhau munyori weKerim Ülker akanyora chinyorwa chinonzi "Cengiz ichavaka 2.7 mabhirioni emapaunzi njanji muCroatia!" Heano maitiro ezvinyorwa; musiyano [More ...]
Mısra Öz Sel, akafirwa nemwanakomana wake Oğuz Arda Sel panguva yetsaona yechitima mu Çorlu musi wa 8 Chikunguru 2018, akazivisa kuti mapurisa maviri akaferefetwa mhosva yekutuka kwake Mutungamiriri nedare. Corlu mudunhu of Tekirdag [More ...]
IETT yakavhura mitsara makumi matatu nemashanu, makumi matatu nembiri kudivi reEuropean uye gumi neshanu parutivi rweAnatoli, kuzadzisa zvinodiwa zvekufambisa zvevagari veIstanbul. IETT ine chinangwa chekupa hutano hwakanaka hwekufambisa kune vagari vemuIstanbul. Zvekufambisa kuenda kuMarmaray [More ...]
Ministry of Transport and Infuction yakazivisa kuti kushandiswa kwedigital tachograph kwakadzoserwa 30 Chikumi 2020. Nezuro muIstanbul uye Ankara mumaguta akawanda, kunyanya vatakuri, iyo Ministry of Transport and Infrastructure 'Dhijitari tachograph' yakauya [More ...]
Ministry Inoruramisa Corps Dzidzisa Chengozi Trial's Commerce Ukama neTCDD
Corlu chitima chekuuraya vanhu vakawanda zvichitevera kupindura kwaita minisito kumubvunzo, nyanzvi mupupuri Bekir Binboğa, Sıddık Yarman uye Mustafa Karaşahine [More ...]
Advanced Technology kuwedzera Nokuchinja kweTurkey Domestic Car
Bursa akarongwa neZvapupu Technical University kweTurkey kuti Automobile uye Bursa 'panel, mueni BCCI Sachigaro Ibrahim Burkay, vakati mudzimba yemotokari kugadzirwa kuchaita mhanyisa Turkey kuti svikiro-soro uye kutendeuka yepamusorosoro kugadzira, [More ...]
İzmit Salim Dervişoğlu Rue ichave imwe nzira kuD-100
Kocaeli Metropolitan Municipality, iyo yaita mapurojekiti anozokonzeresa kutakurwa kwemotokari nekufambisa kutakurwa kwevagari, anovhura Izmit Salim Dervişoğlu Street, iyo inowedzerwa mumigwagwa miviri. Seimwe nzira kuD-2 Highway [More ...]
İzmir Metropolitan Municipality Yakagadziridza Parking Roti YeScrip Vehicles
Izmir Metropolitan Municipality, rokutanga rwaro nokuda nokusaina purojekiti chinyorwa motokari yokupakira nheyo kuTurkey. Iyo nzvimbo yekupaka muMenemoni ndiyo ichava mhinduro yedambudziko rekupaza mukati meguta rose. Izmir Metropolitan Municipality, ane ruzivo mukati meguta rose [More ...]
Çorlu Dzidzira Injodzi Nyanzvi Nyanzvi Kubhadhara 14 Million TL Yese 1 Kuita Kwebasa
Çorlu tsaona yechitima yakagadzwa sehunyanzvi Nyanzvi Mustafa Karaşahin Sıddık Binboğa Yarman 14 rakasiyana basa rekupangana mazano kune Ministry of Transportation rakaonekwa riana miriyoni imwe makumi mana emakumi mana emapaunzi. Isa munzvimbo yeChokwadi [More ...]